बढी तौलका बालबालिकामा मुटुरोगको खतरा, फिट राख्ने यी ५ तरिका – Karnalisandesh
बढी तौलका बालबालिकामा मुटुरोगको खतरा, फिट राख्ने यी ५ तरिका
प्रकाशित मितिः ६ माघ २०७७, मंगलवार ०८:४६ January 19, 2021
काठमाडौँ। कोरोनाको समयमा बालबालिकाको तौलको वृद्धि भएको छ। अमेरिकी वैज्ञानिकले आफ्नो एक अनुसन्धानमा यो कुराको दाबी गरेका छन्।
अनुसन्धानमा बताइए अनुसार महामारीपछि बालबालिका घरबाट बाहिर निस्कन पाइरहेका छैनन्। घरमै बसेका कारण उनीहरुको खाने बानीमा पनि परिवर्तन भएको छ। शारीरिक क्रियाकलाप पनि पहिलेको जस्तो रहेन। जसका कारण उनीहरुको तौलमा वृद्धि भएको छ। जुन गम्भीर रोगको कारण बन्न सक्छ।
बालबालिकामा मोटोपन थप खतरनाक
तौल बढ्नु एक गम्भीर समस्या हो। यदि बालबालिकाको तौल आवश्यकताभन्दा बढी छ भने उनीहरुमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक समस्या हुनसक्छन्। रोबर्ट वुड जनसन फाउन्डेशनका अध्यक्ष डाक्टर रिचर्ड बेसरका अनुसार फिट बालबालिकाको तुलनामा बढी तौल भएका बालबालिकाले आफ्नो शारीरिक र मानसिक क्षमताको कम प्रयोग गर्न सक्छन्।
यसरी राख्नुहोस् बालबालिकालाई फिट
बालबालिकालाई फिट राख्नका लागि दुईवटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। एउटा उनीहरुको खानपिन र अर्को शारीरिक क्रियाकलाप। एउटा स्वस्थ डाइट चार्ट र तालिका बनाएर तपाईं आफ्नो बालबालिकालाई राम्रो स्वास्थ्य उपहार दिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर काट्जा रोवेलका अनुसार तौल बढ्दा निम्तिने समस्या वयस्कको तुलनामा बालबालिकामा बढी भयानक हुन्छ। तसर्थ अभिभावकले उनीहरुको खानपिन र क्रियाकलापप्रति बढी नै सतर्क हुनुपर्छ।
बालबालिकालाई फिट राख्ने ५ तरिका
१.जंक फूडको साटो स्वस्थ खानेकुरा दिनुहोस्
विशेषज्ञका अनुसार बालबालिकालाई जंक फूडबाट टाढा राख्न अत्यावश्यक छ। अभिभावकले बालबालिकाका लागि यस्तो विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ जुन प्याकेटमा बन्द खानेकुराको विकल्प हुन सकोस्। जंक फूडले बालबालिकामा कोलेस्ट्रोलको स्तर आवश्यकताभन्दा बढी नै बढाइदिन्छ। जसका कारण बालबालिकालाई आवश्यक पोषक तत्वको अत्यधिक कमी हुन्छ र फ्याटका कारण बालबालिकाको तौल बढ्ने गर्छ।
२. बालबालिकाको स्क्रिन टाइम कम गर्नुहोस्
कोरोनाको समयमा बालबालिकामा मोबाइल, कम्प्युटर र टिभीको अगाडि धेरै बेरसम्म बस्ने बानी बढेको छ। अभिभावकले बालबालिकाको स्क्रिन टाइम कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यसले बालबालिकाको स्वस्थ बानी नष्ट गरिदिने गर्छ। यसले बालबालिकालाई अल्छी बनाउँछ जुन तौल बढ्ने सबैभन्दा ठूलो कारण हो।
३. दैनिक शारीरिक क्रियाकलाप गराउनुहोस्
बालबालिकाले नियमित शारीरिक क्रियाकलाप गर्न अत्यावश्यक छ। यदि यस्तो भइरहेको छैन भने अभिभावकले यसबारे सोच्नुपर्छ। विज्ञका अनुसार पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले दैनिक कम्तिमा आधा घण्टाको व्यायाम गर्नुपर्छ। यसले बालबालिकालाई शारीरिक रुपमा फिट त गराउँछ नै उनीहरु मानसिक रुपमा पनि फिट हुन्छन्।
४.बालबालिकालाई मानसिक रुपमा बलियो राख्नुहोस्
मानसिक रुपमा बालबालिका तनावमा हुँदा पनि तौल बढ्ने गर्छ। तसर्थ अभिभावकले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यदि आफ्नो बच्चा तनावमा छन् भने उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी अभिभावकको हो।
कम सुत्दा पनि बालबालिका अल्छी हुन्छन् र यसले उनीहरुको तनाव बढाउने गर्छ जुन तौल बढ्नुको कारण हो। अभिभावकले आफ्नो सन्तान चाँडै सुतुन् तर चाँडै उठुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। साथै सात घण्टाको निद्रा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरामा पनि विचार गर्नुपर्छ।
उमेरको हिसाबले बालबालिकाको सही तौल
बालबालिकामा तौल बढ्दा हुने समस्या
बालबालिकाका लागि स्वस्थ खानपान